Pirezidaanti Uhuruu Keeniyaataa ispoortessitootni alaabaa keenya qabatan kana booda baajata dhabuun buufata xiyyaaraa rafuu hin qaban jedhan - BBC News Afaan Oromoo
Pirezidaanti Uhuruu Keeniyaataa ispoortessitootni alaabaa keenya qabatan kana booda baajata dhabuun buufata xiyyaaraa rafuu hin qaban jedhan
Image copyright Fuula Feesbuukii Masaraa mootummaa Keeniyaa
Goodayyaa suuraa Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuuruu Keeniyaataa garee biyyaalessaa maarshaal aartii masaraa motumaatti yeroo afeeran.
''Ispoortessitoota sadarkaa biyyaalessaatti horachuu qofa osoo hin taane gadi buunee hawwaasa keessattis babal'isuu qabna,'' jedhan pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa.
Pirezidaantichi yeroo garee Maarshaal Aartii biyyaalessaa Keeniyaa dorgommii maarshaal aartii adunyaa bara 2019 Kooriyaa Kibbaa, Chunguyitti gaggeeffamu irratti hirmaatan gaggeessan dubbatan.
Dorgommiin Tong-Il Moo-Do jedhamu Kooriyaa kibbaa keessatti dorgommii Maarshaal aartii baay'ee beekamaadha.
Pirezidaanti Uhuruu Keeniyaataa Federeeshinii Tong-Il Moo-Do Adunyaa jedhamu kan Kooriyaa Kibbaatti beekamu irraa Qabattoo ykn saqqii gurraacha [Black Belt] digirii 8ffaa kabajaa kan Maarshaal aartii kana argataniiru.
Badhaasichi pirezidaantichaaf kan kenname dura taa'aa Federeeshinii Tong-IL Moo-Do Keeniyaatiin yoo tahu kaka'umsaa fi deeggarsa itti fufaa pirezidaantichi ispoortiif godhuun akka tahes himaniiru.
Dabalataan pirezidaantichi alaabaa biyyattiifi waancaawwan injifatan garee Kubba Kaachoo biyyaalessaa dhiirotaafi garee kubba saaphanaa dubrtootaa irraa fudhataniiru.
Gareen kubba Kaachoo dorgommii akka Afrikaatti Bamakoo Maalitti qophaa'e irratti kan dorgoma turan yoo tahu, gareen kubba saaphanaa dubartootaa ammoo dorgommii kubba saaphanaa Afrikaa Gibtsi magaalaa Kaayirootti qophaa'e irratti hirmaataa turaniiru.
Maallaqa haaraa Keeniyaa mormiin mudate
Maraatoonii Landan dhiiraafi dubaraan Keeniyaanonni mo'atan
Pirezidaanti Uhuruu Keeniyaataa bulchiinsi isaanii dandeettii ispoortii garaagaraa dargaggota gidduutti babal'isuufi guddisuu akka barbaadu himan.
Tooftaaleen dargaggoonni dandeettii ispoortii adda addaa qaban adda bahanii karaa sirrii tahe irra guddifama qophaa'eera jedhan.
Kaarikulamiin gahumsa irratti hundaa'ee qophaa'ee jiru ijoollee dandeettii ispoortii garaagaraa qaban da'imummaatti adda baasaa akka adeemuuf haala mijeessa jedhan.
Kana booda gareen dorgomtootaa alaabaa biyya keenyaa qabatanii bahan kamiyyuu tikkeettii balalii dhabuun, bakka ciisichaafi baajata dhabuun buufata xiyyaaraa keessa rafuu hin qaban jedhan.
Baajata gahaa tahe gareewwan sadarkaa idila adunyaatti dorgomaniifis ni ramadna jedhan.
Itti dabaluun waldaalee ispoortii garaagaraa baajatni ispoortiidhaaf ramadame dhimma yaadameef qofa ooluu qaba jedhanii baajaticha qisaasessuun garuu waan irra waliif darbamu miti jechuun akeekkachiisan.
Goodayyaa suuraa Pirezidaanti Uhuuruu Keeniyaataa qabattootto gurraacha digirii 8ffaa kabajaa maarshaal aartii yeroo fudhatan.
Keeniyaan har'a adunyaa irratti kan beekamaa jirtu atileetiksiidhaan qofa osoo hin taane kubba kaachoo, kubba saaphanaafi daakaa bishaaniinis maqaan keenya adunyaa irratti beekamaa dhufeera jedhan.
Maqaa dur ittiin beekamnu qofa miti waan haaraadhaan beekamaa jirra jedhan.
Barreesituun dhimma Ispoortii Keeniyaa Amiinaa Mohaammad ispoortessitootni keenya ambaasadara tahuun biyya keenya adunyaa irratti beeksisu jette.
3 Waxabajjii 2019
Maraatoonii Landan: Kipchogeen tokkoffaa, atileetonni Itoophiyaa ammoo 2ffaafi 3ffaa ba'an
29 Elba 2019
Ajjeechaan kantiibaa Gullisoo hojjettoota mootummaa rifaasise
Afgaanistaanitti haleellaa boombii hamaan dhaqqabe